कोरोना उपचार र रोकथाममा सुनवलबाट सिक्ने कि ! – Kanika Khabar
Kanika Khabar ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १६:१४ May 23, 2021 मा प्रकाशित
परासी, जेठ ९ ।
कोरोना सङ्क्रमित वृद्धि भएपछि नववलरासी (बर्दघाट सुुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिकाले हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियू) सहितको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित दश श्ययाको एचडियू र १९ श्ययाको अक्सिजन जडित आइसोलेशन रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकामै सुविधायुक्त अस्थायी कोभिड अस्पताल शुरु भएपछि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बाहेकका सङ्क्रमितको उपचारमा सहज भएको नगरप्रमुख भीमबहादुर थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
अहिले १४ सङ्क्रमितको अस्पतालमा उपचार भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । एचडियू सञ्चालनका लागि सर्वाेत्तम सिमेन्ट उद्योग प्रालिले करिब रु. ७० लाख बराबरको मेडिकल उपकरणसहितको सामग्री उपलब्ध गराएको हो । अस्पतालमा अहिले दुई चिकित्सक र १२ स्वास्थ्यकर्मी रहेको उक्त अस्पतालका डा चन्द्रशेखर यादवले बताउनुभयो । एचडियू सेवाका लागि थप तीन चिकित्सक थप्न लागिएको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हाल सुनवलमा ४३५ सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने ३३ ले सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छ । नगरपालिकाले होम आइसोलेशनमा बसेका सङ्क्रमितको पनि घरमै पुगेर उपचार तथा आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । होम आइसोलेशनमा बसेकालाई अक्सिजन आवश्यक पर्दा तत्कालै उपलब्ध गराउने गरिएको छ भने चिकित्सकको परामर्श र १३ वटै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन र सङ्त्रमणबाट नागरिकको ज्यान जोगाउन नगरपालिकाले थप रु २५ लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ । अस्पतालका डा. यादवले अधिकांश बिरामीहरु जटिल अवस्था भएपछि मात्र अस्पताल आउने गरेकाले समस्या भइरहेको बताउनुुहुन्छ । यसअघि बर्दघाट नगरपालिकाले पनि एचडियूसहितको आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा रहेका सात स्थानीय तह र जिल्ला अस्पतालमा गरी १०३ श्ययाको अक्सिजनसहितको आइसोलेशन शैया छ ।रासस